पोखरीमा स र्प माथि खसे यी ब्यक्ति तर हेर्नुस् त कसले गर्दैछ उद्धार ? अनिल प्रभाकरले खिचे यस्तो दुर्लभ तस्बिर – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > पोखरीमा स र्प माथि खसे यी ब्यक्ति तर हेर्नुस् त कसले गर्दैछ उद्धार ? अनिल प्रभाकरले खिचे यस्तो दुर्लभ तस्बिर
पोखरीमा स र्प माथि खसे यी ब्यक्ति तर हेर्नुस् त कसले गर्दैछ उद्धार ? अनिल प्रभाकरले खिचे यस्तो दुर्लभ तस्बिर
admin September 25, 2021 अन्तराष्ट्रिय, रोचक 0
एजेन्सी । मानिसलाई कहिले काँही यस्तो संकट आउँछ जसका बारेमा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
एक जना फोटो पत्रकार अनिल प्रभाकरले यस्तो तस्बिर खिचेका छन् जसले संसारभरका मानिसको ध्यान तान्छ । उनी जंगलमा घुमिरहेका थिए । त्यती बेला उनले यस्तो घटना देखे । जंगलमा घुमिरहेका बेला एक जना व्यक्ति पोखरीमा खसे । त्यो पोखरी यस्तो खतरनाक थियो की त्यहाँ स र्प पनि थियो ।
पोखरीमा यस्तो दलदल समेत थियो त्यहाँवाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थिएन । उनी बाहिर निस्कने कोशिष गर्दै थिए तर सकिरहेका थिएनन् । सीएनएनमा प्रकाशित समाचार अनुसार ति ब्यक्ति वार्डन थिए । उनी स र्प को अध्ययन गर्थे ।
जंगल सफारीमा रहेका अनिल प्रभाकरले पोखरीमा खसेका ति वाडएनलाई अर्कै जनावरले उद्धार गरिरहेको देखे । उनले त्यो तस्बिर तत्काल खिचे । जंगलमा गएर वार्डन स र्प निकाल्न खोज्दै थिए, त्यतिबेला उनी पोखरीमा खसेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यति नै बेला त्यहाँ एक आरंगुटान आयो र वार्डनलाई त्यहाँबाट निकाल्यो । आरंगुटानले वार्डनको उद्धार गरिरहेको तस्वीर खिचेका प्रभाकरले त्यहाँ धेरै हिलो र घाँस रहेको बताए । पोखरीमा खसेका बेला स र्पले वार्डनलाई हानी गर्न सक्ने भएपनि तत्कालै आरंगुटान आएर उद्धार गरेको थियो ।
यस्ती छिन नायिका प्रियंकाकि छोरी आयन्का, निकै खुशी हुदै छोरीलाई खेलाएको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
आफू भन्दा कम उमेरकि महिलासँग स’म्बन्ध राख्दा भुल्नै नहुने यी ५ कुराहरु जानी राखौं
‘धो खादिनु पा प हो’ भन्दै यी युवकले गरे यी दुई युवती संग एकै चोटी एउटै जग्गेमा …